नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय – Nepal Journal
नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय
Posted By: Nepal Journal August 31, 2018 | १५ भाद्र २०७५, शुक्रबार १५:१४
काठमाडाैं । दिगाम्वर झालाई दूर सञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष रूपमा नाम सिफारिस गरिएको छ । तीनजना मध्ये एकजना कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुने नियम अनुसार उनीसहित अन्य दुईजनाको पनि नाम सिफारिस भएको भएछ । सिफारिस हुनेमा एक जना पूर्वसचिव र अर्का प्राधिकरणकै बरिष्ठ निर्देशक रहेका छन ।
झालाई यस अघिको देउवा सरकारले पनि सोही पदमा नियुक्त गरेको थियो । तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागूभएपछि नियुक्त गरिएका सबै पदहरूको नियुक्ति यो सरकारले खारेज गर्ने भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । पदका लागि आशक्त झाले किन त्यो पद सरक्क छाडे भन्ने प्रश्न त्यही बेला उठेको थियो ।
जवकि त्यसरी नै नियुक्त भएका अरू अदालत गए र पुर्नवहाली भएर आइसकेका छन । झाले किन गरेनन् भन्ने प्रश्नमा प्राधिकरण एक कर्मचारीले भनेका थिए उनी सबैलाई मिलाउन जान्ने खुवी भएका प्रशासक हुन् । उनले प्रकृया पु¥याएर यही सरकारबाट फेरि प्राधिकरणमा आउने ध्याउन्न राखेका छन् । सफल भए भने अचम्म नमान्नु होला । समय परिस्थितिले उनको भनाइ मेल खाने अवस्थामा छ ।
झाले संक्रमणकालको तरल राजनीतिको फाइदा लिएर आयल निगम, दूर सन्चार प्राधिकरण र बिद्युत प्राधिकरणमा समेत नेतृत्व सम्हालिसकेका छन ।
उनले दूरसन्चार प्राधिकरणमा नेतृत्व सम्हाल्न चाहनु हुन्न भन्ने होइन । उनको हैसियत पुग्दैन भन्ने पनि होइन । तर, बिगतमा उनले कमाण्ड सम्हालेका प्राधिकरणहरूको स्थिति के रह्यो ? र, अहिले कस्तो छ ? उनले के योगदान दिए भन्ने महत्वपूर्ण हो । विगतका संक्रमणकालमा देखिएका अनेकन छिद्रबाट पसेर जिम्मेवारी पाए भन्दैका अहिलेको बहुमत प्राप्त स्थीर सरकारले बिवादित र परीक्षण भै सकेका व्यक्तिलाई सो पदमा सिफारिस गर्नुको औचित्य पुष्टि कसरी गर्ला ? प्रश्न यो हो ।
सूचना,प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । बैशाख २३ गते प्राधिकरण सम्वन्धि छानवीन गर्न सूर्यबहादुर राउतको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिबेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ ? असार २९ गते नै समितिले प्रतिबेदन बुझाएको हो भने किन गोप्य राखिएको छ ? प्रतिबेदनले झालाई दोषी देखाएकोले कतै गोप्य राखिएको होइन ? प्रतिबेदनले दोषी देखाउँदै देखाँउदै यदि सिफारिस गरिएको रहेछ भने त्यो बेला सन्चारमन्त्रीको जवाफ के हुन्छ ? कतै आर्थिक प्रलोभनमा झा शिफारिस भएका त होइनन् ? यो सोध्न पाउने कि नपाउने ?
यी प्रश्नको उत्तरबाट सन्चारमन्त्री भाग्न मिल्दैन । जनस्तरमा संचारमन्त्रीको छवि राम्रो बन्न सकेको छैन । उनको प्रस्तुति निम्सराे देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको एकदम नजिक भएकाले मात्र उनले त्यो पद पाएका हुन । उनलाई त्यो पद बोकाको मुखमा कुभिण्डो भएको छ भन्ने आरोप एमालेभित्रै सुन्ने गरेको पाइन्छ ।
सन्चारमन्त्रीलाई उनको बारेमा बाहिर यस्तो छवि छ भन्नुको अर्थ उनले यस्ता बिवादस्पद व्यक्तिलाई सिफारिस नगश्नर भन्ने आसयले लेखिएको छ । उनको छवि हामीले बनाउने होइन, यसमा उनकै विवेकपूर्ण निर्णयले भूमिका खेल्छ । यस्ता सुझावलाई ग्रहण गर्ने कि सुझाव दिनेमाथि पूवाग्रही नजरले हेर्ने त्यो जिम्मा मन्त्री ज्यू कै हो । मन्त्रीको अपारदर्शी निर्णयको प्रश्न कुनै दिन जनतासँग प्रधानमन्त्रीमा खुद प्रधानमन्त्रीले जनताको पक्षवाट सुन्नु नपरोस् । हाम्रो यही कामना छ ।
Be the first to comment on "नित्याय शुद्धाय दिगम्वराय"